0 - SonSon LinLin
ယောကျာ်း တစ်ယောက်ကို အောင်မြင်အောင် ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ မိန်းမ “၁၀” မျိုး
ေယာက်ာ္း တစ္ေယာက္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္တဲ့ မိန္းမ “၁၀” မ်ိဳး ေယာက်ာ္းတစ္ေယာက္ အလုပ္ကိုင္ေအာင္ျမင္ဖို႔ဆိုတာ ငယ္႐ြယ္စဥ္က သူတို႔ရဲ႕မိခင္၊ ဖခင္ေတြက အဓိကပံ့ပိုးမႈေတြ ေပးခဲ့ရတာပါ။ ဒါေပမဲ့အိမ္ေထာင္ရက္သားက်လာတဲ့အခါ ကိုယ့္ရဲ႕လက္တြဲေဖၚရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈဟာ ပိုၿပီးအဓိကက်သြားပါၿပီ။ ပံ့ပိုးတယ္ဆိုတဲ့အရာဟာ ေငြေၾကးပိုင္းရယ္မွာ မဟုတ္ပါဘူး က်န္တဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔လည္း အမ်ားႀကီးဆက္ႏြယ္ေနပါေသးတယ္။ မိန္းမတစ္ေယာက္ဟာ ေယာက်ာ္းတစ္ေယာက္ကို အေအာင္ျမင္ဆုံးေနရာကို တြန္းပို႔ႏိုင္သလို အနိမ့္က်ဆုံးျဖစ္ေအာင္လည္း ဆြဲခ်တတ္ပါေသးတယ္။ ဒီေတာ့ မိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေနရာက ဘယ္ေလာက္ေတာင္ အဓိကက်တတ္သလဲဆိုတာနဲ႔ ဘယ္လိုအခ်က္ေလးေတြ […]
ဆန်ဆေးရည်တွေ မသွန်ပြစ်နဲ့နာ် ဝက်ခြံ တင်းတိပ် မှဲ့ခြောက် နှင့် အရေးအကြောင်းများကို ပျောက်အောင် လုပ်လို့ရတယ် ထမင်းချက်ဖို့ ဆန်ဆေးတဲ့အခါ သွန်ပစ်လေ့ရှိတဲ့ ဆန်ဆေးရည်မှာ မျက်နှာကို ကောင်းမွန်စေတဲ့ အာနိသင်များစွာ ပါရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆန်ဆေးရည်ရဲ့ မျက်နှာကို ကောင်းမွန်စေတဲ့ အာနိသင်တွေ အကုန်ရရှိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆန်ဆေးရည်နဲ့ မျက်နှာသစ်ပေးလို့ ရပါတယ်။ ဆန်ဆေးရည်နဲ့ မျက်နှာသစ်မယ်ဆိုရင် ဆားဝက်ခြံတွေကို ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါ ကျန်ရှိနေမယ့် ချွေးပေါက်ကျယ်ခြင်းတွေကို လျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆန်ဆေးရည်မှာ ပါဝင်တဲ့ […]
“မေးစေ့မှာ ရှိနေတဲ့ ဆားဝက်ခြံတွေကို အမြစ်ပြတ်သွားအောင် ကုသနည်းများ “
“မေးစေ့မှာ ရှိနေတဲ့ ဆားဝက်ခြံတွေကို အမြစ်ပြတ်သွားအောင် ကုသနည်းများ “ ဆားဝက်ခြံတွေဆိုတာ နှာခေါင်း ၊ မေးစေ့ ၊ ပခုံး နဲ့ လက်မောင်းတွေမှာ ပေါက်တတ်ပါတယ်။ မေးစေ့မှာ ဆားဝက်ခြံဖြစ်တာက စိတ်ဖိစားမှု ၊ ဟော်မုန်းမမျှတမှု ၊ အစားအသောက် မမှန်မှုတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းတွေနဲ့ မေးစေ့မှာ ပေါက်တဲ့ ဆားဝက်ခြံတွေကို အမြစ်ပျောက်အောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။ (၁) ရေနွေးငွေ့ ရေဇလုံထဲ ရေနွေးထည့်ပေးပါ။ ခေါင်းပေါ် […]
ခွေးမွေးထားရင် သိထားသင့်သော ခွေးနိမိတ်များ ၁။ သမီးရည်းစား လင်မယား နှစ်ယောက် တွဲလျှောက်နေတဲ့ကြား ခွေးဖြတ်ဝင်ရင် အဲ့ အတွဲ မကြာခင် ရန်ထသတ်တတ်ပါတယ်။ ၂။ မိန်းကလေးတွေ ခြေထောက်ကြား ခွေးဖြတ်တိုးရင် သူ့ကို မကြာခင် အဖေ ဆူမလား၊ လင် ရိုက်မလား တစ်ခုခုပါပဲ။ ၃။ မွေးစကလေးကို ခွေး လျှာနဲ့ လျှက်သွားရင် အဲ့ကလေး ဆေးစွမ်းပါတယ်။ (နေမကောင်းရင် သူ့ ဆေးတိုက်ခိုင်းပါ။) ၄။ […]
သနပ်ခါးက သနပ်ခါးပင်ရဲ့ အခေါက်၊အမြစ်တို့ကနေရရှိတဲ့ အနှစ်တစ်မျိုးပါ။ အဝါရောင် နဲ့ အဖြူရောင်ဆိုပြီး အရောင်တွေ ကွာခြားနိုင်ပေမယ့် အကျိုးပြုပုံချင်းကတော့ တူတူပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀လောက်ကတည်းက သနပ်ခါးကို အသားအရေ လှပကျန်းမာစေဖို့ အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။ သနပ်ခါးက အသားအရေကိုအေးမြစေပြီး နေလောင်ဒဏ်ကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အသားအရေကိုချောမွေ့စေပြီး အပြစ်အနာအဆာကင်းစေမှာပါ။ လူကြီးတွေမှာဆိုရင် ဝက်ခြံ သက်သာစေဖို့အတွက် သနပ်ခါးလိမ်းပေးလို့ရပါတယ်။ ဘေဘီလေးတွေကို ရေချိုးပေးပြီး ခါးခါးလေးလူးပေးလိုက်ရင် သနပ်ခါးနံ့မွှေးမွှေးလေးနဲ့ ပိုပြီးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်။ ဘေဘီလေးပါးပေါ်က […]
အသားညိုသူတွေအတွက် အသားအရေ ကြည်လင်စေမယ့် ပေါင်းတင်နည်း (၅) ခု အသားဖြူသူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အသားညိုသူပဲဖြစ်ဖြစ် မျက်နှာ အသားအရေ ကြည်လင် ဝင်းပနေခြင်းဟာ မိတ်ကပ်လိမ်း ပြင်ဆင်ခြယ်သထားခြင်းထက် ပိုပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိပါတယ်။ အသားညိုသူတွေအနေနဲ့ အသားညိုတာကို ဖြူစင်ဝင်းပအောင် ပြုလုပ်ခြင်းထက် အသားအရေ ကြည်လင်တောက်ပအောင် ထိန်းသိမ်းခြင်းက ဆွဲဆောင်မှု ပိုမိုရှိစေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အသားညိုသူတွေအတွက် အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်မယ့် မျက်နှာပေါင်းတင်နည်းတွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ (၁) နနွင်း၊ ပျားရည်နဲ့ […]
ဟိုတုန်းကဆောင်း (အရမ်းလွမ်းဖို့ကောင်းတယ် ဖတ်ကြည့်)
ဟိုတုန်းကဆောင်း (အရမ်းလွမ်းဖို့ကောင်းတယ် ဖတ်ကြည့်) သစ်ရွက်ခြောက်တွေ ကြွေတဲ့ရာသီ ရောက်ပြီ၊မြောက်ပြန်လေတွေလည်း တိုက်လာပြီ။ဒီအချိန်ဆို အလွမ်းတွေဟာလည်းနှင်းတွေလို ဝေပြီ . . . ။ အလွမ်း . . . တဲ့။ဘာတွေကို လွမ်းတာလဲ။ ငယ်ဘဝကို လွမ်းတယ်အပူအပင်ကင်းတဲ့ ကလေးဘဝကို လွမ်းတယ်။ထန်းလက်ခြောက်တွေကို ခုတ်လှည်းလုပ်ပြီးမီးလှုံဖို့ ထင်းခြောက်ကလေးတွေလိုက်စုဖူးတယ်။ ပုံထားတဲ့ ထန်းသီးတွေက ထွက်နေတဲ့ထန်းစို့(ထန်းမြစ်)တွေကို တူးပြီးမီးလှုံရင်း ဖုတ်စားဖူးတယ်။ တစ်ခါတလေလည်း အမေကထန်းမြစ်တွေကို အမြီးဖြတ်ပြီးအိုးကြီးကြီးတစ်လုံးနဲ့ပြုတ်ညီအစ်ကို မောင်နှ‌မတွေဝိုင်းဖွဲ့ လုယက်စားဖူးတယ်။ […]
သင့္ဖုန္းထဲမွာ ေပၚလာတာဟာ ကံထူးတာပဲ ႐ႊတိဂုံ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးရဲ႕ စိန္ဖူးေတာ္ အနီးကပ္ဖူးၾကပါ။ ကံထူးပါတယ္ရွင့္ သင့္ဖုန္းထဲမွာ ေပၚလာတာဟာ ကံထူးတာပဲ။ ေ႐ႊတိဂုံ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးရဲ႕ စိန္ဖူးေတာ္ အနီးကပ္ဖူးၾကပါ။ ကံထူးပါတယ္ရွင့္ သင့္ဖုန္းထဲမွာ ေပၚလာတာဟာ ကံထူးတာပ။ဲ ေ႐ႊတိဂုံ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးရဲ႕ စိန္ဖူးေတာ္ အနီးကပ္ဖူးၾကပါ။ ခရက္ဒစ္ Unicode သင့်ဖုန်းထဲမှာ ပေါ်လာတာဟာ ကံထူးတာပဲ ရွှတိဂုံ စေတီတော်မြတ်ကြီးရဲ့ စိန်ဖူးတော် အနီးကပ်ဖူးကြပါ။ ကံထူးပါတယ်ရှင့် သင့်ဖုန်းထဲမှာ ပေါ်လာတာဟာ […]
ယနေ့ချိန်ထိ သွေးထွက်အောင်မှန်လွန်းတဲ့ မြန်မာ့ နိမိတ်တဘောင် ဖွင့်ဆိုချက် ရှေးခေတ်မြန်မာ့သမိုင်းတွင် ဘုရင်အဆက်ဆက်ကစပြီး လောကုတ္တရာဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက် များ၌ အတိတ်၊ နိမိတ်၊ စနည်း၊ တဘောင် များကို မူတည်၍ ကြိုတင်ဖြစ်စဉ်များကို နိမိတ်ဖတ်ခဲ့ကြသည်။ ရှေ့၌ လာလတ္တံ့သော အကြောင်းတရား၊ အကျိုးတရား အဖြစ်အပျက်တို့ ကို အကျဉ်းချုံးကာ သယ်ဆောင် လာခဲ့သည့် တေးသီချင်းတို့ကို “တဘောင်”ဟု ခေါ်ဆိုရာ ယခုဖော်ပြမည့် ထင်ရှားကျော်ကြားသော ရှေးခေတ်နိမိတ်တဘောင်များ ဖြစ်ကြသည်။ ကုန်း […]
ဆံပင်ပျက်စီးခြင်း၊ နှစ်ခွဖြစ်ခြင်း၊ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းတို့အတွက် စ်တို့ရေ…. မင်္ဂလာပါရှင် အရင်အပတ်တွေ​က skin care နဲ့ ပတ်သက်တာတွေ sharing လုပ်ပေးခဲ့တာမို့ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ တောင်းဆိုမှုအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ hair care/ hair treatment လုပ်နည်းလေး ကို တင်ပေးပါမယ်နော် Irene ရဲ့ လုပ်ထုံးအတိုင်းပဲ သဘာဝပစ္စည်း/chemical မများတဲ့ product လေးတွေနဲ့ Irene ကိုယ်တိုင် လုပ်ကြည့်ပြီးဖြစ်တဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ အိမ်တွင်းနည်းလမ်းလေးမို့ စိတ်ချလက်ချ လိုက်လုပ်လို့ရပါတယ်နော် […]